Diyaaradaha Maraykanka ee aan duuliyuhu wadin oo hawlgalo ka qaadaya dalka Ethiopia. – Radio Daljir
Diyaaradaha Maraykanka ee aan duuliyuhu wadin oo hawlgalo ka qaadaya dalka Ethiopia.
Addis-abab, Oct 29 -Aqalka cad ee looga arimiyo dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee xarunta looga dhigay dalka Ethiopia, waxaana war laga soo saaray aqalka cad lagu sheegay in diyaaradahaasi aanay weli wax hawlo ama weeraro ah ka qaadin dalkaasi bariga Africa ku yaala ee Ethiopia.
Wasaaradda gaashanadhigga ee dalka Maraykanka ee Pentagon ayaa iyadu naftigeedu xaqiijisay warkaasi, waxaana ay xustay in ujeedadu tahay in lagu waajaho khatarta argagaxisada.
?Xarunta diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee drones waxaa ay ku taalla dalka Ethiopia, waxaana loo adeegsanayaa sahanka iyo war-doonka, iyadoo arrintani ay qayb ka tahay olole weyn oo la sii wadayo oo ah kan la dagaallanka argagaxisada, marka diyaaradahani bilaa duuliyaha ah waxaa loo isticmaalayaa dhinaca sahanka oo kaliya ee looma isticmaali doono hawlaha duqaymaha ah? sidaas waxaa yiri Captain John Kirby oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda gaashanadhigga ee dalka Maraykanka ee Pentagon
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in diyaaradaha Drones-ka ee Maraykanku ay duulimaadka ka bilaabayaan gegi- diyaaradeed oo ku taalla magaalada Arba Minch, waxaana warkaasi markii ugu horeeyey soo tebiyey wargeyska Washington Post xilli dambe oo khamiistii ahayd
Wargeyska Washington Post, ayaa sheegay in diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee MQ-9 Reaper lagu arkay iyagoo ku duulaya hawada magaalada Arba Minch , islamarkaana ay hubaysnaayeen, laakiin dawladda Maraykanka ayaa iyadu beeninaysay warkaasi.
Diyaaradaha Reapers waxaa ay cabir ahaan le?egyihiin diyaaradaha dagaalka ee Jet-ka, waxaana lagu hubaynkaraa banbaanooyin iyo gantaallo, iyagoo la tilmaamay in xawaaraha ay ku duusho uu aad u sarreeyo.
Joogitaanka Maraykanka ee dalka Ethiopia ayaa lagu tilmaamay arrin siyaasadd ahaan xasaasi ah, waxaana saraakiil badan oo maraykan ahi ka walaacsanyihiin in la yaraysto kaalinta Militeri iyo midda sirdoon ee goblka oo dhan.
Afhayeenka u hadlay wasaaradda difaaca ee dalka maraykanka ee John Kirby ayaa beeniyey in garoomada ay diyaaraduhu ka duulayaan ay yihiin saldhigyo ay leedahay dawlada Ethiopia, waxaana uu meesha ka saaray in Maraykanku uu halkaasi saldhigyo Militeri ka samaystay.
Sannadii 2006-dii dawlada Maraykanku waxa ay gacan-siisay soo galitaankii Ethiopia ee gudaha Somalia, waxaana diyaaradaha Maraykanku ay duqaymo ka fuliyeen Somalia, inkastoo dawlaada Maraykanku ay arrintaasi hoos u dhigtay kaddib markii ay si guud u cadaatay kaalinta Maraykanka ee Somalia.
Dalka maraykanka ayaa ka hawlgala saldhiga Militeri ee Camp Lemonnier, waxaana saldhigaasi oo ah mid joogta ah oo ku yaalla dalka Jamhuuriyada Djibouti, waxaana sidoo kale saldhig dhinaca cirka ah Maraykanku ku leeyahay gacanka Manda-Bay ee Kenya, halkaasi oo khuburada la dagaallanka argagaxisadu rumaysanyihiin in ay xarun u tahay diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Drone-ka ee duqaymaha ka fuliya dalka Somalia.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale lasoo weriyey in ay ka duulaan saldhig ku yaalla Jasiirada bad-weynta India ku taalla ee Seychelles, waxaana diyaaradahaasi bilaa duuliyaha ee Fadhiisinka ku leh Jaziirada Seychelles kormeeraan budhcad-badeeda oo badahaasi ka hawlagala.
Ciidamada dalka Kenya ayaa bishan October galay koonfurta Somalia, si ay ula dagaallamaan Al-shababa, waxaana Kenya sheegaysaa in aanay jirin cid si fir-fircoon ugu wehelisa duulaankeeda ka dhanka ah Al-shabaab .
Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jay Carney ayaa sheegaya in Maraykanka ay ka go?antahay in horay loo sii wado dadaallada la-dagaallanka argagaxisada, iyadoo falaarat xooggeedu ku fooraro ururka Al-Shabaab iyo faraca shabakada Al-qaacida ee lagu magcaabo Alqaacidada Jaziirada carbeed oo fadhigeedu yahay dalka Yemen.
?Maraykanku waxaa uu adeegsanayaa dhammaan agabka quwadda Maraykanka, sida tan Militeri, mida shacab iyo tan diblamaasiyadeed, waxaana ay xoojineysaa mukhaabaraadkeeda iyo kartideeda ammaanka, waxaana aan iskaashi adag la sameyneynaa is-bahaysigayaga caalamka si loo cirib-tiro kuwa xagjira? ayuu yiri Jay Carney afhayeenka aqalka cad.
Tan iyo xilligii uu madaxtinimada dalka Maraykanka la wareegay Brack Obama , waxaa dalkaasi maraykanku xooga saarayey diyaaraha bilaa duuliyuha ah ,waxana ay diyaaradahaasi qaadayeen weeraro ka dhan ah ururarada Al-qaacida , Daalibaan iyo kuwa kale ee ka hawlgala dalalka Pakistan, Yemen iyo Somalia.
Weerarada diyaaradaha Drones-ka ayaa waxaa agaasinta wakaaladda sirdoonka dhexe ee maraykanka ee CIA, mana aha arrin ay ku lug-leeyihiin Militeriga Maraykanku, inkastoo hawlgalada qaar loo baahdo gacanta militeriga Maraykanka.
Weeradaa duqaymaha diyaaradaha bilaa duuliyaha ayaa ah ah arrin sir ah, laakiin waxaa inta badan soo shaac saara saraakiil sarsare oo maraykan ah .
Hadaba marka la eego dalka Somalia, saraakiisha dhinaca maamulka ee maraykanku waxa ay weli ka yara gaabsanayaan in ay wax tacliiq ah ka bixiyaan in diyaaradaha bilaa duuliyaha ee lagu tilmaamay kuwo sahan uun ah markaasi diiradda lagu saarayo dalka Somalia, laakiin sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashanadhigga ee Maraykanka ayaa isagoo magaciisa qarinaya shegay ? waxaan ka walaacsanahay deganaansho la?aanta Somalia?.